JABKII SHIISHADA WQ; Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
JABKII SHIISHADA WQ; Cali M Diini
Xuquuqda sawirka: Google
Sheedaani waa sheeko dhab ah, waxa ay ku dhacday nin widaaygay ah isaga ayaana iiga sheekeeyey iina ogolaaday inaan qoro, laakiin waxa uu ka cudurdaartay in magiica warbaahinta bulshada lagu faafiyo. Sidaas darteed waxaan adeegsanaynnaa magaca Dugsiiye.
Sheekadan ayaa qayb ka ah buug cusub oo aan qoraalkiisa wado, haddaba sheekada haddaan idinla wadaago inkastoo ay aad u dheerayd waan soo koobaya waxay u dhacday sidan:
Waa galabnimo sabti ah January 26, waa maalinta qaranimada Australia, Perth na waxa ay isku diyaarinaysaa maamuuska maalintaan. Cirka waxaa ka muuqda daruuro teelteel ah, Qabow ma ahan kulaylkii darnaaa ee Perth na galabta ma jiro. Huur ma ahan dabayl wax bitinaysaana ma jirto, waxaadba mooddaa in lagu soo dhaweynayo cimmilada wanaagsan dabaaldega lagu guda jiro.
Kumannaan qofood oo isugu jira qaybaha bulshada ayaa waddooyinka qulqulaya ayaga oo qaarkood ku labbisan yihiin maryo lagu xardhay calanka dalka halka qaar gacanta ku sitaan calanka qaarna waaba huwan yihiin. Waxa ay ku qulqulayaan jiinka wabiga Iswaan (Swan) ee bartamaha Perth qaada si ay u daawadaan bulalayrma ka la ridi doono iyo qaalma-rogodka ay diyaaradaha dagaalka ee ciidanka cirku ku samayn doonaana magaalada dusheeda.
Gadiidka dadwaynaha ayaa la ciirciirayaa kumannaan daqiiqad walba gurada u fariisanaya. Dawladdu waxa ay waddooyinka soo saartay tareenno iyo basas dheeraad ah si u qaybqaataan daadguraynta dadwaynaha.
Kumannaan isugu jira Boliiska State-ka iyo kan Federaalka ayaa waddooyinka lagu soo is dhaafaya ma farasmagaaluhuna wuxuu la ciirciirayaa dad caaryoomey tiro intey ka qabaan.
Dugsiiye asagu waxa uu ka qayb yahay kumannaanka ruux ee ka shaqaynaya daadguraynta dadwaynaha oo waxa uu wadaa mid ka mid ah basaska magaalada.
Markii sacaaddu gaartay afartii (4pm) ayaa la gaaray waqtigii Dugsiiye qaadan lahaa hal saac oo nasasho ah. Maadaama magaalada la wada xiray Dugsiiye waxa uu ku noqday dhiboogiisa (depot) si uu halkaas bareegiisa (break) ugu qaato.
Dugsiiye waxa uu aad u cabbaa shiishada oo uu aad u jecel yahay dhawr sannadood na uu soo cabbayay.inkastoo aanu mar walba iyo maalin walba cabin haddana xilliyada uu fasaxa yahay ayuu isku maaweeliya malaha balwad kale aan iyada ahayn.
Dugsiiye markuu saacaddii nasashada soo galay ayuu isku qanciyey meel uu tegi jirey oo aan ka dheerayn inuu aado oo baabuurkiisa kaxaysto, 45 daqiiqona halkaas ku soo qaato, iyadoo sii socod iyo soo socodna sugayaan magaalada sidaan ka warraney xaalkeedu ceeryoon yahay, ayuu go’aansaday inuu bartii shiishada iyo SHISHA BARkii cabbaar ku soo nafiso.
Dugsiiye markii uu maqaayaddii tagay waxa uu dalbaday xabad shisha ah, koob bun ah( kafee) iyo dhalo biyo macaan ah, dhammaan marka la isku daro waxa uu dalbaday waxay noqonaysaa lacag dhan $30 doolar. Intii wiilkii Afgaaniga ahaa shiishada soo samaynayay waxa ay noqotay 10 daqiiqo+10 daqiiqo oo Dugsiiye maqaaxida u soo socday. Sidaaa ayaa 20 daqiiqo u baxday, waxaa u hartay 40 daqiiqo oo 10 daqiiqo oo sii socod ah laga jaray=30 daqiiqadood.
Markii shiishada la soo dhinac dhigay ayuu dhawr jeer jiiday waxa uu se dareemay in wax ka khaldan yihiin oo ay dhaladu cabbursan tahay. Waxa uu u wacay wiilkii meesha ka shaqaynayay asaga oo xanaaqsan oo qaylinaya. Calaa iyo xaal intii wiilku dhaladii sii waday oo soo waday waxa ay isku noqotay 7 daqiiqadood sidaas na waxaa Dugsiiye ugu hartay 23 daqiiqo oo qur ah.
Dugsiiye si boobsiis ah ayuu bahashii u nuugay sanka iyo afkana qiiq cad ka sii daayay. Asaga oo aysan wali gaarin meelihii ay gaari jirtay ee xaraarada, ayaa waqtigii la dhammaaday. Asaga oo tubbadii afka ugu jirto oo wali nuugaya ayuu istaagay, waxa uu rabaa in uu sii dhalaaliyo ilaa ilbiriqsiga ugu dambeeya. Waxa uu ka xanaaqsan maqaayaddaan caajiska badan ee 17 daqiiqo hal dhalo oo shiisho ah samaynaysay. Inta uu is hilmaamay ayuu dhaqaaqay asaga oo tubbadii afka ugu jirto, markaas baa dhaladii barbar u dhacday oo burburtay dhimbilihii ka faniinayna dad halkaas shiisho ku dhuuqaya kala didiyeen. Wiilkii Afgaani ahaa ee maqaayadda lahaa markii uu arkay dhalada jabtay ayuu soo orday asaga oo xanaaqsan oo leh “Dugsiiye what have you done, OMG? This bottle is so expensive I just bought yesterday, it cost me $160.” Dugsiiye oo ka welwelaya in uu shaqada ka daaho ayaa ku yiri “Don’t worry bro, I will pay whatever it cost you, I will see you tonight.” Dugsiiye oo degdegaya ayaa gaarigiisi galay oo xoog ku dhaqaaqay.
Maqaaxida iyo dhibooga waxaa u dhexeeya waddo tareen iyo isgoys labo jid oo waaweyni isku gooyaan aadna mashquul u ah. Ugu horraynba tareenkii ayaa Dugsiiye ku dhegganaa muddo 4 daqiiqo ah, markii tareenkii uu dhaafayna waxaa gaduud ku noqday nalki isgoyska ku xirnaa, asaguna 4 daqiiqo oo kale ayuu ku dhegganaa. Dugsiiye oo labo daqiiqo u hartay ayaa nalkii oo cagaar ah “Green” u noqday markaas ayuu si waalli ah ku dhaqaaqay. Waddadu waa 60kmp laakiin Dugsiiye wax 15 sekan ka yar ayuu 78kmp ku gaaray, isla markiiba waa kuwaan Boliis aan la aqoon meel ay ku dhuumanayeen Dugsiiye nalalka iyo dawan dhiileedka(Seran) ka daba shitay. Dugsiiye si deg deg ah ayuu waddada dhineceeda u istaagay.
Sarkaal Boliis ah ayaa soo degay u na sheegay in sababta loo joojiyay tahay in uu xawaare aad ah ku socday (speeding). Dugsiiye ayaa sarkaalkii u sheegay in uu shaqo ka daahsan yahay kana codsaday in uu deg deg u fasoxo. Sarkaal waxa uu Dugsiiye ka codsaday in uu Laysinkiisa u dhiibo, Dugsiiyana laysinkii ayuu sarkaalkii u dhiibay asaga oo leh “please officer I am already late for work, I don’t want to loose my job.” Intii sarkaalka Boliiska ahi laysinka Dugsiiye ku soo baarayay kombiyuuterka gaariga u saaran, Dugsiiye aad ayuu u welwelay oo wadnihiisi u ruxmayay, waxa uu ka welwelayaa in shaqada laga eryo waayo dhawr goor oo hore ayuu shaqada ka daahay oo digniino la siiyay tii ugu dambaysay waxa ay ahayd dhawr asbuuc ka hor markii hurdo la tagtay oo uu hal saac shaqada ka daahay, kadib markii uu habeenkii oo dhan shiisho dhuuqid u fadhiyay.
Waxa kale oo uu ka walaacsan yahay in dhibcaha laysinku ka dhammaadaan oo sidaas shaqada ku waayo. Dhibcaha laysinku waa 12 dhibcood horay waxaa Dugsiiye looga qaaday 5 dhibcood galabtana ugu yaraan waxaa laga la kacayaa 4 dhibcood sidaas darteed waxaa u haraya 3 dhibcood oo qur ah. Taasina waxa ay khatar galin kartaa shaqadiisa waliba waxa ay sababi kartaa in shaqadu anshax marin ku samayso marka ay ogaadaan in dhawr goor “speeding) lagu ganaaxay.
Sarkaalkii Boliiska ahaa waxa uu Dugsiiye u jaray $200 iyo 4 dhibcood oo ganaax ah. Dugsiiye waraaqdii ma ba uusan fiirin ee jeebka ayuu inta gashaday deg deg u dhaqaaqay.
Dugsiiye habeenkii markii uu shaqadii dhammeeyay ayuu fiiriyay waraaqdii ganaaxa mise 4 dhibcood ayaa laysinkiisa laga la kacay. 3 dhibcood oo qur ah ayaa hartay taas oo macneheedu yahay in hal mar oo kale haddii la ganaaxo uu laysinka lumin doono muddo 3 bilood ah, haddii uu laysinka lumiyana shaqada waa lumiyay.
Dugsiiye markii uu shaqada dhammeeyay waxa uu toos u aaday maqaaxidii shiishada waxa uu na dalbaday xabbad shiisho ah kaddib na wiilkii maqaaxida ayaa u yimid oo raba lacagtii dhaladii jabtay. Wiilka Afgaaniga ee maqaaxida iska lihi waxa uu ku adkaystay in Dugsiiye bixiyo lacagta dhalada maadaama uu asagu jabiyay dhalada haddii Dugsiiye diido ama dafiro in uu jabiyayna kaamarada maqaaxida ayaa marqaati ah iyo dadkii maqaayadda joogay. Dugsiiye waxa uu ku calaacalay in uusan $160 doolar bixin karin laakiin Afgaanigii maqaaxidu waxa uu ku adkaystay in lacagtii dhalada la siiyo. Dugsiiye waxa uu maqaayadda shiisho ka cabbayay 2 sannadood oo xiriir ah oo habeen walba uu imaanayay habeenka ugu yarna waxa uu uga tagayay $30 taas oo u dhiganta $30×365 habeen= $10,950×2 sano= $21,900. Saddex sannadood oo kale na waxa uu shiishada ka cabbayay maqaaxi Lubnaani ah laakiin labadii sano ee ugu dambaysay Afgaanigaan ayuu macmiil u ahaa.
Dugsiiye waxaa $160 doolar u haysta nin uu labadii sannadood ee la soo dhaafay siiyay $22,000 oo doolar ama ka badan waayo marmar ayuu Dugsiiye hal habeen 3 dhalo oo shiisho ah cabbi jiray.
La soco qaybta 3aad haddii Eebbe idmo.
Ugu dambayn Dugsiiye waa uu dhiibay boqol iyo lixdankii ($160) doolar iyo labadii boqol ($200) ee ganaaxa ahaa laakiin habeenkaas Dugsiiye waxa uu noqday habeen beddalay habnololeedkiisi oo dhan. Habeen Dugsiiye dhexmaquuriyay feker dheer iyo xisaabtan. Dugsiiye waxa uu xisaabiyay lacagta uu shiishada ku cabbay 5 sannadood oo uu shiishada cabbayay. Shantaas (5) sannadood hal ama labo habeen ayuusan Dugsiiye shiisho cabbin inta kale habeenka uu ugu yar yahay hal dhalo oo shan iyo labaatan doollar ($25) ayuu cabbayay. Waxa u dheeraa cabbitaan, shaah ama bun iyo marmar uu cunto ka cuno maqaaxida shiishada inta uusan shiishada cabbin.
Dugsiiye celcelis ahaan waxa uu ku qiyaasay in uu habeen walba maqaaxida shiishada siiyo soddon ($30) doolar oo Oostareeliyaan doollar ah, taas oo shantii sannadood noqonaysa $54,750 oo Oostareeliyaan doollar ah oo u dhiganta $39,500 oo doollar Maraynka ah.
Dugsiiye marka uu xisaabiyay lacagta uu shiishada ku cabbay shantii sannadood ee tagtay wadnaha ayaa istaagi gaaray. Ku darso oo Dugsiiye xaaskiisa iyo ilmihiisu waxa ay deggan yihiin guri kiro ah, gudaha Kenya, kirada uu bishii gurigaas ka bixiyo waa afar boqol ($400) oo doolar oo Maraynkan ah. Balse xaafadda qoyskiisu deggan yahay qiimaha guryuhu waa afartan kun($40,000) oo doolar oo Maraykan ah. “Ka warran haddii aan lacagtaas keydsan lahaa, sow maanta xaaskayga kama farxiyeen oo guri uugu ma gadeen? Sow ilmahaygu guri ay leeyihiin ma ay degganaadeen ma na ay dareemeen in ay leeyihiin aabbe fiican uu guri u iibiyay? Sow kumannaanka doolar ee aan sannad walba kirada ku bixiyo iima baaqateen?” ayuu Dugsiiye naftiisa waydiiyay.
Dugsiiye oo naftiisa la sii hadlaya waxa uu yiri “Dhacdo kastaa sabab ayaa ka dambaysa, sabab kasta na saamayn ayay leedahay, ma jirto dhacdo sabab la,aan dhacda, haddii ay jirto sabab qofku wax ku joojiyo tan maanta igu dhacday waa sababtii aan balwadda shiishada ku joojin lahaa.
Sheekadaan oo dheer ka na mug iyo miisaan culus intaan ayada oo buugaysan ayaan soo saari doono sannadkaan dabayaaqadiisa haddii Eebbe nolol igu gaarsiiyo.
Waxaan hubaa marka uu buuggaasi soo baxo in uu dhallin badan u noqon doono waddadii ay uga weecan lahaayeen jidkii mugdiga ahaa ee balwadda iyo quusta, uu na u tilmaamo dooni mid cusub oo ku hoggaamiya horumar iyo farxad iyo in ay noloshooda dib u dhisaan.
WQ; Cali M Diini